देउवाले भने, ' मलेसियामा ९२ बर्षिय प्रधानमन्त्री बन्न हुने म अहिल्यै सभापतिबाट किन हट्छु ?'
'सहमति अनुसार चलाउने हो भने विधानको कुरा नउठाउनुस नत्र विधान मान्नुस'
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले आफूले तत्काल पार्टी सभापति नछोड्ने फेरि दोहोर्‍याएका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको छैठौं महाधिवेशनलाई सम्वोधन गर्न आएका देउवाले आफूलाई कसैले हट भनेर नहटने बताए।
मलेसियामा हालै ९२ बर्षिय नेता प्रधानमन्त्री भएको स्मरण गराउँदै देउवाले आफू अझै ९२ बर्ष नभएको जनाए। उनले ठट्यौलो शैलीमै भने, ' मलेसियामा ९२ बर्षिय प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा म चाहि उमेरकै कारण देखाएर अहिले कसरी छोड्न सक्छु। म ९२ बर्षको पनि भएको छैन।'
आफू विरुद्ध अभियान छेडेका नेताहरुको गतिविधीलाई भुल्न नसकेको झल्को देउवाको प्रस्तुतीमा देखिन्थ्यो। उनले पार्टी सभापति रहेको आफू विरुद्ध अभियान छेडेर पार्टी बलियो नहुने बताए। देउवाले चेतावनीको शैलीमा भने, ' गाली गर्ने र आलोचना गर्नेहरुलाई मैले पनि धन्यवाद भनेर चुप लागेर बस्दिन।'
देउवा अगाडी मन्तव्य राखेका रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्रको एकताको लागि सहमति र सहकार्य गर्नका लागि गरेको प्रस्तावलाई देउवाले ठाडै अस्विकार गरे। देउवाले पार्टी की विधान अनुसार सञ्चालन हुने की सहमति अनुसार सञ्चालन हुने बताए। उनले भने, ' सहमति र विधान सँगसँगै जान सक्दैन । की विधान अनुसार चल्छ पार्टी की सहमति अनुसार। आफूलाई फाइदा हुँदा सहमति नहुँदा विधान अनुसार भनेर पार्टी चल्दैन। '
कम्युनिष्टहरु राष्ट्रवादी पनि नहुने तथा उनीहरुले समृद्धी पनि नल्याउने तर्क गर्दै देउवाले प्रश्न गरे, ' महंगी बढाएर के को समृद्धी ?'
पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पनि देउवाले सरकारका जनविरोधी गतिविधीमा ध्यान दिन निर्देशन दिए।